Ukupheka Ikhekhe ku kefir e multivarka futhi kuhhavini (emathinini)
Amakhekhe ku kefir e multivarka noma kuhhavini kungenziwa ngezindlela ezahlukene. Kulesi sihloko thina uyokwethula inkulumo nawe ukuba ezimbili zokupheka ethandwa kakhulu ngokuba ukuqaliswa okuyinto akudingi isikhathi esiningi kanye izithako.
Yenza ikhekhe okumnandi ku kefir e multivarka
Lungiselela bayobhaka ekhaya kulula futhi nokusetshenziswa idivayisi ezifana multivarka, le nqubo ngisho lula futhi ngokushesha.
Ngakho, ukwenza ikhekhe ku kefir, ngezithombe ongawabona kulesi sihloko, sizodinga:
amaqanda Fresh makhulu - 4 PC.
yogurt-esitolo amafutha - ingilazi egcwele;
ufulawa grade aphezulu - ingilazi egcwele;
ushukela akuyona likhulu kakhulu - 250 g;
Noma yimuphi lamafutha okupheka - 35 g (yefomu Lubrication);
Soda + yokudlela ukudla apula uviniga - ku spoon dessert;
omisiwe noma amantongomane (ungasebenzisa imbewu poppy) - ngesicelo.
Amakhekhe ku kefir e multivarka okuphekiwe ngokushesha okukhulu. Kodwa ngaphambi kokuthi ufake iyunithi inhlama kufanele wayixova kahle. Lokhu kudinga amaqanda Beat ngosizo blender bese uthele kubo isiphuzo amasi futhi uthele ushukela. Nalapha ugovuze izithako ngesitjeni sinye Kumelwe ubeke ufulawa baking soda ukuze ucime isipuni uviniga. Uma wayefisa, base ungakwazi ukwengeza omisiwe steamed, amantongomane okugazingiwe noma omisiwe imbewu poppy.
Ngaphambi ukubhaka ikhekhe ku kefir e multivarka, kufanele ukhiqize kahle. Kuze kube yimanje, endishini olujulile idivaysi ofuna ukuyibhangqa gcoba kahle kancane elicibilikile lamafutha okupheka bese uwathele zonke inhlama ngaphambilini wayixova. multivarku Landelayo udinga ukubeka imodi batch futhi ulungiselele umkhiqizo ihora.
ngesikhathi esithile kumele kwanele ukwenza ikhekhe okumnandi ku kefir ngokugcwele propeksya baba aluhlaza futhi kancane kamnandi.
kufanele Ngiyavuma kanjani amakhekhe okuzenzela?
Ngemva ukupheka kudivayisi Likhipha isignali kwaqedwa ukubhaka, ikhekhe kufanele zigcinwe amalahle ngisho ¼ amahora. Ngaphezu kwalokho, kudingeka ukususa ngokucophelela usebenzisa spatula. Ufaka umkhiqizo ku-ufulawa ikhekhe, ungakwazi ufafaze oluyimpuphu noma uthele le chocolate white. ikhekhe Ngaphezu kwalokho kumele uthathe yizicucu nabezindlu akhona itiye eqinile noma ukhokho.
Senza amakhekhe emathinini ku kefir
Uma ufuna ukwenza akuyona ikhekhe elikhulu, futhi eziningi izinto ezincane, bese ibhaka nabo kuhhavini kumele usebenzise metal noma abicah isikhunta ekhethekile. Kodwa izinto zokuqala kuqala.
Mayelana nendlela wabhaka ikhekhe ethafeni ku kefir e multivarka, sabatshela ngenhla. Nokho, kunezinye ongakhetha ukulungiswa le dessert. Omunye wabo kudinga ukusetshenziswa kuphela elibilile ubisi isiphuzo, kodwa futhi umkhiqizo ezifana imajarini.
amaqanda ezinkulu fresh - 3 PC.
ufulawa grade aphezulu - 3 izibuko egcwele;
ushukela akuyona likhulu kakhulu - 300 g;
elikhulu usawoti iodized - ingcosana;
Noma yimuphi lamafutha okupheka - 200;
deodorized uwoyela - I-amgcobe isikhunta;
omisiwe pitted amnyama - 1.5 izinkomishi.
Ngaphambi kokwenza ikhekhe okumnandi ku-yogurt emathinini amancane, kufanele kube kahle wayixova akuyona kakhulu base obukhulu. Lokhu kudinga imajarini esithambile ekamelweni lokushisa, bese ugaye kube chips obuhle ufulawa. Okulandelayo nokuqaqa isisindo kufanele engeza ingcosana usawoti kanye aqhubeke ngokushesha ukulungiswa enye ingxenye yokuhlola.
Amaqanda inkukhu kufanele beat kakhulu blender kanye ezincane-ushukela, bese uthele kubo yogurt, uhlanganise kahle futhi ushiye eceleni kuze nokonakala olungaphelele umkhiqizo amnandi. Uma une mass ketshezi homogeneous, kufanele ungeze ku imajarini imvuthu. izingxenye Mix Kunconywa usebenzisa ngesipuni enkulu kuze inhlama akuyona obukhulu khulu.
Uma ufuna ukwenza lezi amakhekhe kancane, isisekelo liyadingeka ukuze ungeze ezengeziwe amnyama seedless omisiwe. Ngenxa yale njongo kufanele ukuhlela, scalded ngamanzi abilayo futhi ake ume amanzi ashisayo cishe imizuzu engu-20. Okulandelayo, kufanele izithelo ezomisiwe engahashazanga futhi, kakhulu ziyathuthumela colander bese uthele inhlama ngaphambilini okuphekiwe. Hlanganisa izithako, ungakwazi ngokuphepha uqhubekele baking yabo.
Owenza futhi balungiselela amakhekhe kuhhavini
Ukwenza base elimnandi nge omisiwe kumelwe sithathe metal noma abicah isikhunta for ikhekhe, ngokucophelela uxubha futhi ome nabo on ipuleti. Ngaphezu kwalokho, ngamunye notch impumuzo liyadingeka gcoba uwoyela deodorized, bese 2/3 yokugcwalisa test. Ngenxa yalokho, isikhunta udinga ukuthumela kuhhavini, osuke usushisa kakade ukuba 210 degrees. ware Bhaka kufanele ibe mayelana 20-23 imizuzu, baze ukwandisa ngobukhulu futhi kancane redden.
Uma Muffin zilungele, kumele Banduluka izitsha by prying ekuphambukeni evamile. Ngokulandelayo, isikhunta kudingeka gcoba ngamafutha yemifino futhi, ayifake kude elilandelayo nqwaba base bese uthumela kuhhavini.
Khonza itiye okumnandi Muffin okuzenzela omisiwe
Esekwenzile wonke amakhekhe e netikotela, kumele agqoke ipuleti ezivamile bese ukwethula amalungu omkhaya. Kufanele kuqashelwe ukuthi imikhiqizo zinjalo okumnandi kakhulu kushisa. Hambisa ukuba itafula futhi kungaba kanye itiye elimnandi, kanye ikhofi eqinile futhi chocolate hot. Ujabulele ukudla kwakho!
Pancake nge banana
Apples isiraphu ebusika: iresiphi
Fish inkemba: zokupheka ekhaya
Shawarma Vegetarian: zokupheka
Okudingayo enkulisa ingane? Asizwise lokhu!
The best inoveli iDemo ngothando
Smartphone Micromax Q415: Uhlolojikelele isici, incazelo kanye nokubuyekeza
Ukwahlukaniswa isabelomali izindleko
I collar ukuze embhedeni ekuweni - iyithuluzi elibalulekile endlini nezingane
"Mushroom ukungafi": sezindawo okumangazayo ukhunta
Ukuphelelwa Umoya: Izimbangela, Izimpawu, ekwelapheni amakhambi abantu. elele singathatha syndrome
Bangaki kg pound, awunsi futhi spool - Ingemuva